Iskaashatada Vision Ridge: Lacagaha Hantida ee Joogtada ah II & III
Nooca: Maalgashiga Saameynta Badan, Hantida Dhabta ah
Mawduuca: Beeraha, Gaadiidka Nadiif ah, Waxtarka Tamarta, Tamarta La cusboonaysiin karo, Biyaha
Halkii lagu maalgelin lahaa "hantida dhabta ah" sida canshuurta ganacsiga iyo ceelasha saliidda, Vision Ridge waxay u aragtaa fursadaha noocyada cusub ee hantida sida shabakadda ugu weyn ee farsamada baabuurta farsamada, EVgo. Aragtideeda waa in "laga dhigo suuqyada suuqyada si loo xalliyo caqabadaha waaweyn ee jiilka."
$ 7.5 milyan; asalkiisu yahay 2018
Vision Ridge Partners waxay qeexaysaa hantida dhabta ah ee hodanka ah ee ka hooseeya radar ee maal-galiyeyaasha dhaqameedyada. Meelaha diirada la saarayo waxaa ka mid ah biyaha, gaadiidka, beeraha, dhulka, iyo waxtarka tamarta. Faylalka waxaa ku jiri kara wax kasta oo ka yimaada qashinka oo qashinka organic u noqda tamar si beeraha cusub u kora canjaar aan miisan lahayn GMO biyo yar.
Soo Celinta Lacagta: Waqtiga hore si loo qiimeeyo; dhaqaaluhu wuxuu ku jiraa heerka maalgashiga.
Saameynta Bulshada & Deegaanka: Tusaalooyinka maalgashiyadii hore ee ay sameysay Vision Ridge waxaa ka mid ah EVgo, oo ah shabakadda ugu weyn wadanka ee xarumaha degdegga ah ee baabuurta korontada. Nidaamka gaadiidka noocan oo kale ah ayaa ah mudnaanta koowaad ee barnaamijka McKnight ee barnaamijka Midwest Climate & Energy.
Wakhti hore si aad u soo sheegto.
Sawirka Sawirka: Mariordo
Dib-u-Eryin Qaadashada: Maqaalka McKnight Foundation ma aqbalo ama ha kugula talin waxyaallo ganacsi, nidaam, ama bixiyeyaasha adeegga.
Last updated updated 8/2018